I-Argus Pro, sihlalutya ukongamela ividiyo yakutshanje kwiReolink | Iindaba zeGajethi
I-Argus Pro, sihlalutya ukongamela ividiyo yakutshanje kwiReolink
Phinda uqalise yinkampani yamagqala koku khuseleko lwasekhaya, basungule umlo olungileyo weemveliso zokujonga ividiyo kunye nokunye ngakumbi kule minyaka idlulileyo. Into ekusenokwenzeka ukuba awuyicingeli yile yokuba ezi mveliso zazingenazingcingo kwaphela… ukhuseleko ngaphandle kweentambo? Itekhnoloji ayimisi ukuvela.
Siza kujonga ukuba yeyiphi intsebenzo enikezelwa yile khamera intsha, kunye namandla ayo, kwaye ngokuqinisekileyo nobuthathaka, hlala uhlalutyo lwethu namhlanje ukujonga ukusebenza kwale khamera.
1 Uyilo kunye nezixhobo: Ngaphantsi kuhlala kuninzi
2 Iimpawu zobuchwephesha: Isisombululo seHD esipheleleyo
3 Ukuphinda usebenzise isicelo kunye namandla
4 Amava omsebenzisi kunye nenqanaba lomhleli
Uyilo kunye nezixhobo: Ngaphantsi kuhlala kuninzi
I-Reolink iphantse yahlala ibonakalisiwe kwiimveliso zayo ngokubandakanya izinto ezincinci kunye noyilo. Yinto ethi ngokwembono yethu ifaneleke ukuba sithathela ingqalelo into yokuba sijamelene neekhamera zokhuseleko, inyani yokuba ezi khamera zingabonakali kwinqanaba lokuyila ekhaya, kwaye ukunqanda imvakalelo yokuhlala ujongiwe kufanelekile . Njengoko besitshilo, sifumana ikhamera emile njengepilisi, icinezelwe kwaye ngaphandle kweengile ezilungileyo, idrafti kwaye kulula ukuyifumana. Ungayijonga kwiAmazon.
Ubukhulu: 96 x 58 x 59 mm (3.8 x 2.3 x 2.3 in)
Ngaphambili sinazo zombini iilensi kunye nesenzi esincinci esinyanzelayo esiya kuthi ngaphandle kwamathandabuzo sincede ukusebenza kwayo. Kwelinye icala sinerabha encinci kwelinye icala esinokuyisusa amaxesha ngamaxesha njengoko sifuna ukufaka ikhadi leMicro SD kunye neqhosha lokuseta kwakhona ikhamera. Kwelinye icala, ikhamera inokongezwa kwiphakheji, imeko yesilicone eya kwenza ukuba ikhamera ikwazi ukumelana ngcono nemozulu engalunganga ukuba sithatha isigqibo sokuyibeka ngaphandle. Uyilo luyiplastiki emhlophe kuzo zombini iziseko kunye nomzimba wenkqubo, Ngaphandle kokuba, njengoko besitshilo, indawo yelensi.
Iimpawu zobuchwephesha: Isisombululo seHD esipheleleyo
Imodeli yeArgus Pro yale khamera yeReolink ikwanothotho lweempawu zobuchwephesha esiza kuzo neenkcukacha, nangona kunjalo, eyona nto ibalulekileyo ngumthamo webhetri yayo, inyani yokuba Sinesisombululo esipheleleyo se-HD 1080p sokurekhoda kwaye siphile, kunye nokubanakho ukugcina kwikhadi le-MicroSD wonke umxholo wealam, ewe, asizukugcina ilifu ngaphandle kokuba sibhalisele inkonzo yeReolink.
woluvo I-1080p HD kwizakhelo ezili-15 / umzuzwana
Umbono wasebusuku Ewe-10m ubude
Zoom 6x yedijithali
Ubungakanani bokubamba 130º
Somlomo Ewe-Isandisi-lizwi esine-alam
Ibhetri I-5.200 mAh + itshaja yelanga
Ukugcina ngaphakathi ImicrosoftSD 64GB
Ukongeza Siren / Izaziso / Isixhobo sokujonga ukuhambisa
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuzimela kwayo okubaluleke kakhulu kubulelwe kwi-5.200 mAh ibhetri, ekwaziyo ukuhlawuliswa ngenxa yepaneli yelanga esinokuyithenga ngepakethi okanye ngokwahlukeneyo, eyenza ikhamera efanelekileyo ngaphandle. Ukuzimela, kuvavanyo lwethu lokuqala, kuye kwasinika ukuya kuthi ga kwinyanga yokurekhodwa kwesenzi senzwa Ngaphandle kokusebenzisa ngokupheleleyo ibhetri, ibhetri enokuthi ngaphezu kweeyure ezingama-2 igqityiwe. Ngaphandle kwamathandabuzo, yeyona asethi yayo iphambili, ukuzimela.
Ukuphinda usebenzise isicelo kunye namandla
Inkqubo yeReolink Kuyimfuneko kakhulu ukuze sikwazi ukongeza ikhamera kulawulo kunye nenkqubo yolawulo lomxholo owufumanayo ikhamera. Ke, into yokuqala esiza kuyenza kukukhuphela usetyenziso Android okanye iOS kuxhomekeka kwindlela yokusebenza esiyisebenzisayo. Xa sinayo, siya kucinezela iqhosha u "+" kwikona ephezulu ngasekunene emva koko sitshekishe ikhowudi ye-QR ebonakala ngasemva kwikhamera iya kusikhokela ngenkqubo yolawulo oluzenzekelayo. Inyani yile yokuba ujongano lwesicelo kunye nenkqubo yolawulo zikhululekile.
Nje ukuba kubandakanywe, siya kuba nakho ukufikelela kuzo zonke izixhobo zekhamera ngokusetyenziswa kwe-iOS, Ezi zezona zibalulekileyo phakathi kwezo sivavanyileyo:
Qalisa inkqubo yokufumanisa intshukumo eyenza ukuba ikhamera isebenze kuphela xa iyifumana
Fikelela bukhoma kwaye uqondise zombini isandi kunye nevidiyo yento eyenzekayo
Nxibelelana nesithethi ngesandi esikhupha kwifowuni ephathekayo
Isaziso sezaziso zokuhamba
Ukugcinwa kwemizuzwana engama-30 edlulileyo xa utsibela isaziso
Isilumkiso sebhetri esisezantsi
Ngokuzenzekelayo ukurekhoda, uvule kwaye ucime
Ngaphandle kwamathandabuzo, usetyenziso kunye namava omsebenzisi ayonelisi, ngaphandle kokuba ezi khamera zeReolink azikadibani ne-Alexa okanye iKhaya likaGoogle (ngokucacileyo hayi ngeKhayaKit), abancedisi abasandula ukuthunyelwa eSpain. Ngelishwa kuyakufuneka sihambe ngokwalo naluphi na uhlobo lolawulo ebusweni bekhamera yevidiyo, kodwa isicelo silunge kakhulu.
Amava omsebenzisi kunye nenqanaba lomhleli
Amava ethu omsebenzisi ebelungile ngokubanzi, ikhamera inika iziphumo ezilungileyo kwaye intsebenzo ibe yinto enokulindelwa kwinkampani enamava kolu hlobo lwemveliso, siza kubona eyona ilungileyo kunye neyona mveliso imbi.
Ukuchasana kwenzwa yentshukumo
Sifumene eyona mveliso imbi kwinto yokuba ayihambelani nabancedisi abakhulu abanjenge-Alexa okanye i-HomeKit, ke ngekhe sikwazi ukwenza ngokuzenzekelayo ukusebenza ngaphandle kwesicelo sakho.
Eyona asethi iphambili Kule khamera, ngaphandle kwamathandabuzo ukongeza kuyilo, yinto yokuba ukusebenza kukhulu kakhulu, kokubini ukwenziwa kwenkqubo kunye nokubanakho ukurekhoda kwi-HD epheleleyo kunye nokurekhoda kwimowudi yasebusuku ziyamangalisa.
Sijongene nemveliso ebiza i-euro ezingama-118 kwiAmazon, engathatheli ngqalelo kakhulu ukhuphiswano, nangona izakubiza iindleko ukukhuphisana neenkampani ezinje ngeXiaomi okanye Yi ngokwexabiso kunye nokuhambelana. Kwakhona, uReolink unesibonelelo Isaphulelo se-10% esikhethekileyo kunye nekhowudi: AGREO10.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-Argus Pro, sihlalutya ukongamela ividiyo yakutshanje kwiReolink
Ungayicima njani iakhawunti yam ye-Instagram
I-Sonos ihlaziya izithethi zayo ibenza ukuba zihambelane ne-Alexa eSpain